LibreOffice 6.4.1 uye 6.3.5 vanosvika kugadzirisa bugs mune ese akateedzana | Linux Vakapindwa muropa
Iyo Gwaro Foundation inoita kuti iwanikwe kune vashandisi ingangoita maviri mavhezheni ehofisi yayo suite. Imwe yacho ndeyechizvino-zvino, inonyanya kukwirisa, uye inosanganisira ese matsva mabasa ari kuitwa, asi zvakare mamwe madudu. Kune rimwe divi, inotipawo vhezheni yechinyakare iyo yainokurudzira matimu ekugadzira, aine mashoma mabugs asi zvakare mashoma mabasa. Maawa mashoma apfuura vakagadzirisa zvese zviri zviviri, pakati pazvo zvinomira pachena LibreOffice 6.4.1 yekuve mutsva.
LibreOffice 6.4.1, inoitika kune software v6.4.0, asvika kugadzirisa anopfuura makumi maviri bugs. Iyo Gwaro Foundation haina kuratidza chero seyakakosha kana yakakosha kururamisa, asi chokwadi ndechekuti huwandu hwekuvandudzwa munzira yekubvisa mabugs inotipa fungidziro yekuti iyo nyowani vhezheni ichashanda zvirinani uye kupfuurisa kupfuura iyo yaburitswa izvozvi masvondo mana apfuura. Zvakadaro, kambani haina kukurudzira v6.4.1 yayo suite yezvikwata zvekugadzira.
Kupfuura zana nemakumi maviri ebugs akagadzwa muLibreOffice 120 uye 6.4.1 mu80
Iyo inotevera yakakurudzirwa vhezheni yezvikwata zvekugadzira ndeye 6.3 dzakateedzana. Chazvino chiverengero chiri LibreOffice 6.3.5, zvinoreva kuti izvo zvavakasunungura kwemaawa mashoma ndiko kudzokororwa kwechishanu mune akateedzana. Shanduro shanu dzavakaruramisa madhiragi ndicho chikonzero nei kambani ichienderera ichichipa seyakachengeteka. Mune ino nhepfenyuro inovandudza, Iyo Gwaro Sisekelo yakagadzika zvinopfuura makumi masere kukundikana.
Zvisinei neshanduro inosanganisirwa nesisitimu yedu yekushandira, yepamberi kana iyo yakakurudzirwa zvikwata zvekugadzira, iyo yekuvandudza haisati yasvika kumahofisi epamutemo ekuparadzirwa kwakawanda kweLinux. Kugona kunakirwa neumwe wavo, izvozvi tinongova nesarudzo imwe chete: dhawunirodha software kubva ku peji yepamutemo, kubva kwatinogona kurodha pasi mapakeji yeLinux, Windows uye macOS. Iwo mapakeji Flatpak y Snap havasati vavandudzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » LibreOffice 6.4.1 uye 6.3.5 yatovepo kugadzirisa zvikanganiso mune ese akateedzana, angangoita mazana maviri muhuwandu hwakazara